8-da barnaamij ee ugu wanaagsan ee dib-u-warshadaynta loogu sameeyo Android | Androidsis
8-da barnaamij ee dib-u-warshadaynta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Aaron Rivas | 10/04/2021 16:00 | Codsiyada Android, Ciyaaraha Android
Waayo, cidina ma qarsoona maanta taas meeraha wuxuu marayaa meel loo rogo. Heerkulka adduunka ayaa si aad ah u kordhay sanadihii la soo dhaafay, haddii aan ku sii socono caadada aan sida caadiga ah ugu qaadno nolol maalmeedkeena, way sii wadi doontaa inay kordho, taasoo keeneysa, cawaaqib xumo kale oo badan, dabka kaynta, astaamaha cimilada ee musiibada (abaaraha daran, daadadka, duufaannada, iwm), dabar goynta noocyada xoolaha, dhalaalka barafka iyo waxyaabo kale.
Arrintu waa mid aad u culus in ururada sida UN, isbahaysiga caalamiga ah, dowladaha iyo wakiilo kale oo saameyn weyn ku leh adduunka ay kor u qaadayaan fulinta tillaabooyinka iyo siyaasadaha lagu yareynayo isticmaalka waxyaabaha laga soo saaray batroolka, hirgelinta isticmaalka tamar nadiif ah ( sida kan qoraxda iyo dabaysha) iyo Abuurista iyo kicinta caado dib-u-warshadaynta iyo wasakhda-wasakhda iyada oo loo marayo qashinka, iyo kuwo kale, iyo qodobkan ugu dambeeya ayaa ah inaan kuu keenay qoraalkan, si aan kaaga caawinno dib-u-warshadaynta qashinka iyo walxaha aad inta badan isticmaasho, 8 ka mid ah barnaamijyadooda ugu fiican ee loogu talagalay taas hadda ayaa laga heli karaa Play Store for Android.
Isku-dubbaridkan waxaad ka heli doontaa 8-da barnaamij ee dib-u-warshadaynta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android ee aad kala soo bixi karto oo aad ku rakibi karto Google Play Store. Dhammaantood waa bilaash, waxaa xusid mudan.
1 Telodoygratis - barnaamijka dib u warshadeynta iyo wax siinta
2 Maxaan dib u warshadeeyaa?
3 Sida dib loogu warshadeeyo dharkaagii hore
4 Dib-u-warshadaynta Farsamada
5 Dib u warshadeynta fudud ee dharka la isticmaalay
7 Fikradaha dib u warshadaynta dharka la isticmaalay
8 Qashin ilaa Lacag
Telodoygratis - barnaamijka dib u warshadeynta iyo wax siinta
Waxaan ku bilaabi doonnaa isku-dubbaridkan mid ka mid ah barnaamijyada ugu xiisaha badan ee ku jira Android Play Store si dib loogu warshadeeyo. Telodoygratis waa codsi si cadaalad ah u dhameystiran kaas oo lagu adeegto Waxaad awoodi doontaa inaad la wadaagto walxahaas iyo alaabooyinka aanad mar dambe isticmaali doonin oo aad qorshaynaysid inaad iska tuurtid isticmaaleyaasha kale ee barnaamijka. Taa baddalkeeda, waxaad awoodi doontaa inaad ku hesho, tan tan, walxo iyo waxyaabo adiga waxtar kuu yeelan kara.
Asal ahaan, waxay ku saabsan tahay madal u shaqeysa sidii dhexdhexaadiye si loo siiyo alaab dib loo isticmaali karo si aan loo tuurin oo ay nolol cusub u helaan. Mana aha qasab in la isweydaarsado; Waxaad sidoo kale bixin kartaa ama heli kartaa walxo iyo walxo dib-loo-cusbooneysiin karo iyadoon la helin isbeddello noocan oo kale ah.
Barnaamijkan waxaad ugu deeqi kartaa wax kasta oo ka bilaabma dharka ilaa waxyaabaha ay caruurtu ku ciyaaraan, sidoo kale waxaad ku heli kartaa waxyaabo aad xiiseyneyso oo qof kale uusan sii isticmaali doonin. Waa inaad la xiriirtaa oo keliya isticmaalaha, haddii aad xiisaynayso waxa ay hayaan.
Developer: Nidaamyada TwinSMS
Maxaan dib u warshadeeyaa?
Magaca waxaad ka heli kartaa fikrad ah ujeedka barnaamijkani yahay. Ujeeddadeedu waa inay nagu hagto farshaxanka dib-u-warshadaynta, iyadoo naga caawineysa inaan ogaano waxyaabaha, qashinka iyo qashinka dib loo isticmaali karo ama aan dib loo isticmaali karin., tanna waxay u leedahay xog ururin aad u ballaadhan oo qof kasta oo adeegsade ah uu heli karo, taas oo, sida wax wanaagsan, ay si joogto ah u sii fideyso, marka la isu geeyo dadka isticmaala badan ay sameeyaan maalin walba waxyaabaha dib loo isticmaali karo. Taa baddalkeeda, waxaad ka mid noqon kartaa bulshadooda oo waxaad ka caawin kartaa kaydka xogta walxaha dib loo cusboonaysiin karo inay koraan.
Waxyaabaha kale ee barnaamijkan dib-u-warshadaynta ee loogu talagalay Android sidoo kale bixiyaa waa hagaha meelaha aad ku qaadan karto walxahaaga qashinka si dib loogu isticmaali karo. Maxaa intaa ka badan, wuxuu ku siinayaa macluumaad la xiriira dib-u-warshadaynta oo ku caawin kara.
Codsiga si joogto ah ayuu u korayaa, sidaa darteed wuxuu had iyo jeer ku darayaa dhibco badan oo dib-u-warshadeyn ah wuxuuna ku socdaa horumar joogto ah.
Sida dib loogu warshadeeyo dharkaagii hore
Ma aha oo kaliya inaad dib-u-warshadayn karto qashinka iyo waxyaabaha sida caagga iyo muraayadda; dharka sidoo kale dib loo isticmaali karaa. Sidee? Iyadoo la adeegsanayo barnaamijkan, mid ka mid ah Waxay ku siin doontaa fikrad la'aan xad dhaaf ah oo aad u adeegsato dharkaas aan adiga kugu habboonayn ama surwaal jabay oo aan la hagaajin karin.
App-kani wuxuu hayaa buug-gacmeedyo fiidiyowyo ah oo aad ku isticmaali karto dhar kasta, surwaal, shaati, gaab, surwaal iyo waxyaabo kale oo badan. Kaliya dib uma isticmaali kartid si hal abuur leh si aad ugu soo celiso booskii ay mar hore ku laheyd qolkaaga, laakiin Waxaad sidoo kale qaadan kartaa dhar kasta si aad u siiso adeegsi gebi ahaanba cusub oo lama filaan ah.
Qiyaas inaad isticmaaleyso jeebadaha shaati ama surwaal si aad ugu isticmaasho inaad ku keydiso waxyaabaha yaryar, ama aad u isticmaashid boorsada gaagaaban si aad ugu beddesho boorso wax ku ool ah. Waxaa jira fikrado fara badan oo dib loogu warshadeeyo dharka si fudud, dhaqso iyo fudud iyadoo la adeegsanayo casharro tallaabo-tallaabo ah. Baadh wax walba oo barnaamijkani kuu hayo ha iska tuurin dharka aan kuu adeegi doonin, iyadoo laga caawinayo ka fogaanshaha wasakheynta deegaanka si aan loo baahnayn.
Sida dib loogu warshadeeyo dharkaagii hore.
Developer: ila raadiya
Haddii, marka lagu daro inaad ka caawiso deegaanka farsamooyinka dib-u-warshadaynta, waxaad jeceshahay oo aad rabtaa inaad farsamooyin ka dalbato raaxada gurigaaga ama meel kasta oo leh waxyaabo badan oo qashin ah sida balastik, kartoonno, galaas iyo in ka badan, codsigan ayaa runtii kaa caawin doona adiga waxay kuu noqon doontaa wax soo jiidasho leh oo xiiso leh.
Barnaamijkan, wax uun kama qaban doontid inaad ka caawiso yareynta iyo ka fogaanshaha cawaaqib xumada ka dhalan karta deegaanka, laakiin waxaad sidoo kale ku dhaqmeysaa dhammaan xirfadaha aad ku leedahay xagga farshaxanka iyo farsamada gacanta. Waxeey heesataa casharro badan oo tallaabo-tallaabo ah si qashinka iyo qashinka loogu beddelo waxyaabo dib loo isticmaali karo iyo qurxinta gurigaaga ama carruurtaada, haddii ay dhacdo inaad rabto inaad u samaysato alaabo ay ku ciyaaraan, tusaale ahaan.
Waxaa jira buug-yare ballaaran oo aad ku baari karto fikrado badan oo aad ku qurxin karto beertaada ama qol kasta oo gurigaaga ku yaal, oo maxaa diidaya? Hadiyado dhalasho samee. Waxaad isku arki doontaa horjoogayaal aad u tiro badan oo hagitaan ah oo adiga kuu danayn doona. Iska hubi oo dib u warshadeynta walxaha qashinka si hal abuur leh oo madadaalo leh!
Dib u warshadeynta fudud ee dharka la isticmaalay
Kani waa codsi kale oo aan ku hagi karno nafteena si aan nolol cusub ugu siino dharka aynaan hadda isticmaalin, ama maadaama oo aanaan mar dambe haysan, way jabtay ama wasakhaysay. Dib-u-warshadaynta fudud ee dharka la isticmaalay waa barnaamij cusub oo kordhinaya buugaagtiisa casharro tallaabo-tallaabo ah si aan looga tuurin dharkaas oo xilliyada qaarkood aan u xirno inaan u aadno cunista, filimada, inaan ku lano saaxiibbadeena ama inaad u baxdo guriga.
Waxaa laga yaabaa in sabab kale oo aad u rabto inaad dharkaaga u tuurto ay tahay iyada oo qaabab ka baxsan. Waan ka xumahay kiiskan kale ee suurtogalka ah, Barnaamijkan waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa dharka dharka la yiraahdo, ama si buuxda u qaad, si aad u siiso ujeedo kale oo hal abuur leh, iyo dhammaan fiidiyowyada casharrada ee barnaamijka dib-u-warshadayntu ku siiso.
Farshaxanno ayaa loo baahan doonaa si loo bilaabo dib-u-warshadaynta dharka aad mar dambe u baahan tahay, oo leh agabyo fudud iyo qalab ay ku jiraan isticmaalka maqas iyo cirbado. Dib-u-naqshadayso dharkaas aad rabto inaad si dhakhso leh oo fudud u tuurto, adigoon ku sii dheerayn, oo ha ku nijaasayn deegaanka qaab aad u muhiim ah oo aan loo baahnayn barnaamijkan dib-u-warshadaynta.
Developer: Appbox Bilaash ah
Haddii aad ka timid Catalonia, barnaamijkan ayaa kaa ridi kara luul. Qashinka waxaad gacanta ku haysaa qalab aad si fudud ugu aqoonsan karto qashinka iyo walxaha dib loo cusboonaysiin karo, wax mararka qaar xoogaa adag noqon kara, badanaa sababta oo ah maaddooyinka oo aad u tiro badan oo badanaa aan la aqoon oo ay adag tahay in la ogaado haddii dib loo isticmaali karo iyo in kale.
Hal qodob oo ka soo horjeedaa ayaa ah inuusan lahayn luqada Isbaanishka, sidaas darteed Kuma talineyno haddii aadan ku hadli karin Catalan. Waxay ku dari karaan luuqado badan mustaqbalka, laakiin shaki ayaa ku jira maxaa yeelay barnaamijka waxaa loo sameeyay oo loo sameeyay kaliya bulshada Catalan.
Fikradaha dib u warshadaynta dharka la isticmaalay
Maaddaama aan ognahay in dharka ay ka mid yihiin waxyaabaha inta badan la tuuro inta lagu jiro nolosha qof celcelis ahaan, halkan barnaamij kale oo laxiriira dib u warshadaynta dharka. Waana in Fikradaha dib-u-warshadaynta dharka la isticmaalay ay yihiin codsi bixiya hagitaanno xiiso leh oo tilmaamo ku saabsan waxa aan ku siin karno funaanaddaas oo aynaan mar dambe isticmaali doonin ama surwaalkii aannu iska tuuri lahayn maxaa yeelay si aan macquul ahayn ayaa loo jebiyey, tusaalooyinna la siiyaa .
Codsigan kaliya ma awoodi doontid inaad ku abuurto dhar cusub iyo dhar adigoo adeegsanaya dharka la iska tuurayo, laakiin sidoo kale Waxa kale oo aad abuuri kartaa qalab sida silsilado, dugaagado, cimaamado iyo waxyaabo kale oo badan adoo adeegsanaya. Hal-abuurnimadu waa shay aad kaga faaidaysan karto qalabkan. Xitaa waad sameyn kartaa boombalo iyo xayawaan cufan, ama waxaad sameyn kartaa gogol. Ma jiraan wax cudurdaar ah oo aan dib loo isticmaalin dharka!
Developer: Wararka Apps Top
Qashin ilaa Lacag
Si loo dhammeeyo liistada codsiyada dib-u-warshadaynta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android, waxaan ku darnaa kulankaan, kan kaas oo waxaad ku dhiiri gelin kartaa dhaqanka dib u warshadaynta kan ugu yar guriga, oo maxaad u dhihi weyday, u ciyaar si loo dilo caajis.
Waa ciyaar la timid xujooyin iyo xujooyin, dhammaantoodna la xiriira dib u warshadaynta qashinka. Qiimee walxaha si wanaagsanna isugu dubbarid ficiladaada si aad uga caawiso deegaanka bey'ada horay u socota. Qashinka ilaa Lacagta waa la ciyaari karaa iyada oo aan laga helin khadka internetka, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon in lagu ciyaaro meel kasta, wakhti kasta. Waxaad sidoo kale iyaga kula ciyaari kartaa asxaabtaada qaabka multiplayer, si aad uga dhigto madadaalo iyo baashaal.
Ku hel abaalmarin heer kasta oo aad dhaafto oo aad meeraha ku badbaadiso ciyaartan, intaad caado ka dhigato dib-u-warshadaynta si aad ugu dabaqdo nolosha dhabta ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 8-da barnaamij ee dib-u-warshadaynta ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android
Fikradaha magaca asalka ah ee 'Instagram'